Microsoft 365 Defender inounza zviziviso zveemail pazviitiko zvitsva
Microsoft yanga ichishanda kugadzira iyo Microsoft 365 Defender kurongedza mhinduro yakazara ye tech tech. Iyo kambani yakawedzera akati wandei maficha anobatsira mugore rapfuura futi. Dzazvino pane irwo runyorwa rwezvinhu zviri kuwana ziviso dzeemail kana zviitiko zvitsva zvikaitika mukati me Microsoft 365 Defender domain.
Microsoft 365 Defender ichakuzivisa nezve zviitiko zvekuchengetedza
Ndokunge, kana dziviriro suite ikaona chero anomaly kana kupindira, inogona kukutumira iwe chiitiko chinozivisa ipapo ipapo. Tsamba yakataurwa yaizove neruzivo rwese iwe rwaungade kuziva nezve zviitiko zvekuchengetedza.
Semuenzaniso, zvinoenderana nezvirongwa zvaunenge wasarudza, iyo email yekuzivisa chiitiko ichakupa akasiyana data, senge nguva, mhando, uye kuomarara kwechiitiko chacho. Izvi zvinogona kuve zvakakosha nekuti mushandisi anogona kutora nhanho inodiwa vari voga kana kuvatumira kuzvikwata zvinoenderana.
Mune iyo skrini yakagovaniswa paMicrosoft Tech Nharaunda, tinogona zvakare kuona sarudzo dzekugadzirisa yambiro mune-zvakadzama maficha. Semuenzaniso, vashandisi vanosvika pakusarudza kuti ndiani anotanga kuziviswa uye kuti panofanira kunge paine email yekutevera kana nyaya imwecheteyo ikaitika kechipiri.
"Iyi email yekuzivisa inoita kuti iwe ugone kuongorora zviitiko zvako nemazvo, pasina kuda chero dambudziko retiitiketi kana kusangana kweAPI. "Inogona kuve rubatsiro rwakakura mukushandura maitiro ako ekuchengetedza uye kushandisa hunyanzvi hwekuvandudza hunopihwa kuburikidza neichi chiitiko cheyambiro yekudyidzana," Microsoft akadaro.
Tichifunga kuti makambani mazhinji anoshandisa kubatanidzwa kweAPI kana mamwe masisitimu ekuteedzera zviitiko zvekuchengeteka mukati mesangano, Zviitiko Zvekuzivisa kubva kuMicrosoft 365 Defender zvechokwadi zvinouya zviri nyore.
Kamwe kana mushandisi aisa mitemo yekuzivisa, vanogona kugara pasi vozorora, vachiziva kuti Defender injini yaizozivisa kana paine dambudziko. Nekuti idzi chenjedzo dzinouya seemaimeri, kuzvibata pane imwechete-nyaya hwaro zvinogona kugadzikana futi.
Zvichienderana nehurongwa hwesangano, iwe unogona kuwedzera vanogamuchira emaema ekuyambira futi. Ehezve, maitiro aya haatore zvinopfuura sekondi.
Mune dzimwe nyaya dzakabatana, Microsoft 365 Defender ikozvino inogona kuongorora uye kuzivisa zvimwe uye zvemberi nzira dzekutyisidzira kwekuchengetedza. Zvinotonyanya kukosha, chikamu cheZviitiko chebhizimusi suite chinobvumira vashandisi kuti vawane ruzivo rwakakwana nezvekurwiswa nguva dzese.
Iyo irinani chiitiko kuferefeta yakaratidzawo kuti inoshanda mukudzivirira kurwiswa kwakafanana mune ramangwana.
Kuwedzera kusimba kupokana naSolorigate uye kumwe kurwisa kwakaomarara neMicrosoft Defender
Kusvitsa nyowani yeMicrosoft 365 Yemunhu neyeMhuri kunyoreswa
Microsoft 365: Windows uye Hofisi kunyorera bundle
Maitiro Ekugovana Hofisi 365 Kunyorera Kumba Nevamwe